Garoobada Iyo ceebtooda ugu weyn - iftineducation.com
iftineducation.com – Ninka marka uu guurka ku cusub yahay aad buu u qiimaynayaa sidoo kale marka uuna weligii naag furin laakin haddii mar uu naag furo, kama naxo furiinka.
Waxaad arkaysaa maalmahaan nin 25 jir ah oo soo furay shan naagood wax ka badan, sidoo gale waxaad la kulmaysaa gabar yar oo labataan sano gaarin garoob ah oo seddex nin isku soo martay.
Waxaa kaloo jirta haddii naagta ay furiin u barato iyadana kama harayso furiinka, waxay rabtaa nin kasta inay is furaan, kuma cusla in la furo.
Waxaa kaloo ay rabtaa mar walba inay nin kale guursato, siiba haddii ay kacsi badan tahay, waayo raga way kala galmo duwan yihiin, sidoo kale way kala qalab weyn yihiin, marka furiinka aad buu u dhib badan yahay.
Qofka u barto dalaaqa naag kuma raaxaysanayo wuxuu u hanqaltaagayaa naagtii ugu fiicnayd noloshiisa soo marto, sidaa waxaa la mid ah naagaha garoobka ah iyagana ninkii ugu fiicnaa oo raaxada ay la guteen ayay marwalba sheegaan.